Marc Ravalomanana Vonona amin�izay hitranga
Raharaha Houcine Arfa Mikorapaka ny fanjakana, tsy taitra ny Frantsay
Afa-baraka tanteraka ny fanjakana Malagasy, tarihin-dRajaonarimampianiana tamin’ilay ampamoaka goavana nataon’i Houcine Arfa, nilazany fa nanome 70 000 euros ho an’ny minisitry ny fitsarana izy ary 30 000 euros hafa ho an’ny “procureur” ho saran’ny fanafahana azy.
Faminganana an-dRavalomanana Niainga tany amin’ny kaominina mankany amin’ny boriborintany
Efa tamin’ny taona 2017 no niharan’ny antsojay hatrany ireo mpanara-dia ny antoko Tiako i Madagasikara sy ny filoha mpanorina azy, Marc Ravalomanana.
Anarana jeneraly roa no re fa mety hisafidianana izay olona hapetraka eo amin’ny toeran’ny praiminisitra hisolo an’i Mahafaly Solonandrasana Olivier amin’izao fotoana dia ny minisitry ny fiarovam-pirenena Rasolofonirina Béni Xavier sy ny Sekretera jeneralin’ny fiadidian’ny Repoblika Ralala Roger.
Korontana eto amin’ny firenena Velon’ahiahy ihany koa ny CFM
Namoaka fanambarana tetsy amin’ny biraony etsy Ampefiloha omaly ny avy eo anivon’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny CFM, tarihin’ny filohany Maka Alphonse.
Ity taona 2016 ity no nitetezan�ny filoha mpanorina ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana faritra betsaka indrindra hatramin�izay niverenany indray teto an-tanindrazana ny volana oktobra taona 2014.
Nanamarika ireo fitsidihana nataony ny fahitana hatrany ny fankafizan’ireo vahoaka manerana ny Nosy azy. Nisisika hiaraka haka sary aminy ny olona tamin’ireo toerana nolalovany, indrindra ny tanora. Taorian’ny fitsidihana nataony tany ampitan-dranomasina ka nanatrehany ny fivorian’ireo aziatika mpiara-miasa amin’ny Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), fikambanambe ao Azia ao dia ny fijerena ireo tanora nitady asa teny Ankorondrano indray no nisantarany ny fiverenany ny volana mey 2016. Fivoahana ny renivohitra nataony voalohany kosa anefa ny fijerena ny zava-nisy tao Fianarantsoa. Taorian’ny fitsidihany an’i Toliara ny volana jona ihany izy no mba niato kely saingy ny volana aogositra mandra-pahatonga ny volana novambra teo kosa dia tena nitohivakana indray ny fitetezam-paritr’ity mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo sady kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ity. Faritra maro no voatety tao anatin’ny efa-bolana toa an’Ambondromamy, Mahajanga, ny tany amin’ny faritr’i Sofia, Antsirabe, Maroantsetra, Mananara Avaratra, Toamasina, Brickaville, Vatomandry, Anjozorobe, Sambava. Tsy mipetrapetra-poana, araka izany, ity mpanao politika ity fa efa mijery ny zava-misy, mihaino ny fitarainan’ny vahoaka ary matetika dia namaha olana avy hatrany sahady mba hahafahana mametraka paikady hanavotana ny firenena. Fa nanamarika ny asany tamin’ity taona 2016 ity koa ny fihodinan’ny orinasa Tiko AAA sy ny fisokafan’ny tranombarotra AAA Magro mivarotra ny vokany eo Behoririka sy Tanjombato ary ny fanomezany lanja ny vita malagasy, iasany miaraka amin’ireo mpandraharaha eto an-toerana. Teo amin’ny sehatry ny finoana, dia i Marc Ravalomanana no voafidy ho filohan’ny komitin’ny jobily faha-50 taonan’ny FJKM sy ny faha-200 taona ny nidiran'ny Filazantsara teto Madagasikara araka ny tapaka nandritra ny Synaoda lehibe FJKM faha-18 natao tao Antsirabe ny volana septambra 2016. Teo amin’ny lafiny politika dia ny nanaovany fanambarana fa ho kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izy, ary miandry ny daty ofisialy hanatanterahana izany. Nikoropaka ny mpitondra ankehitriny taorian’io fanambarany io sy manoloana ny fitetezam-paritra ataon’i Marc Ravalomanana ary koa mahita ny olona maro be hatrany mirohotra mitsena sy mifampiresaka aminy amin’izay toerana alehany, ka mihazakazaka mitety faritra ihany koa mamoron-javatra hisehoana vahoaka na tsy dia maveza-danja aza.